I-Stone Ridge, imfihlo enembono entle yechibi
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguJosie And Nathan
Ngaphandle koBubumfihlo beChibi! Ibekwe ngaphantsi kweemayile ukusuka echibini kunye nemizuzu emi-5 ukusuka kwidokhi yokufikelela yoluntu enemibono emihle. Ikhaya lethu likhululekile kwaye lixhotywe ngokupheleleyo malunga nayo nantoni na onokuyidinga ngexesha lakho echibini nabahlobo bakho okanye usapho. Ininzi indawo yokupaka ukuba utsala izikhephe okanye iitreyila. Udinga indawo ethe kratya, jonga "I-Shed e-Stone Ridge" sabelana nge-driveway, ke uyakuba right next door!
Ukuba ujonge indawo efanelekileyo echibini kodwa ngombono omkhulu kunye nobumfihlo obuninzi, Wamkelekile. Uya kuba nendlu yonke oza kuyisebenzisa, ngendawo yokuhlala evulekileyo kumgangatho ophambili, kunye nebhedi enkulu kunye nebhafu. Kukho igumbi losapho elitofotofo kwigumbi elingaphantsi elinemidlalo, iipuzzle kunye neprojektha kunye nescreen. Amagumbi okulala ama-2 kunye nebhedi yecandelo liya kulala iqela lakho lonke. Umgangatho ongaphantsi kwakhona unebhafu epheleleyo kunye nempahla.
I-HDTV ene-I-Hulu, I-Amazon Prime Video, I-Fire TV, I-Disney+, I-Netflix, I-HBO Max
Emazantsi nje kokufika kukaSchmidt, kufutshane neHartford Beach State Park. Imizuzu eli-15 ukuya eShady Beach okanye eSodak Shores ukuya kwindawo yokuchitha ubusuku, okanye e-Ortonville kukutya, igesi, kunye negrosari. Imizuzu engama-20 kumntla weMilbank.
Umbuki zindwendwe ngu- Josie And Nathan
Sibakho ngamanye amaxesha. Sihlala kumnyango olandelayo, kodwa sikwahamba, ukuze singafikeleleki ngexesha lokuhlala kwakho. Umgcini-ndlu wethu uhlala kufutshane xa kukho into engahambi kakuhle ngexesha lokuhlala kwakho.